१.टाईप वान् डाईबेटिज : यसका बिरामी दूब्ला पातला हून्छन् । ४० वर्ष भन्दा कम उमेरमा बढी हून्छ । यो प्रकारको मधूमेह इन्सूलिनको अभावका कारण हूने हुँदा उपचारका लागि इन्सुलिन नै चाहिन्छ । बिरामीमा तुरुन्त लक्षणहरु देखिन्छ । यो बशांणुगत हूँदैन ।
२.टाईप टु डाईबेटिज : यसका बिरामी प्राय मोटा हून्छन् । ४० वर्षभन्दा बढी उमेरका लागि बढी हून्छ । यो प्रकारको मधुमेहमा इन्सुलिन रेसिष्टेन्ट (इन्सुलिनले काम गर्ने शक्ति घट्ने अवस्था) हुने हुँदा खाने चक्की वा इन्सुलिन नि आवश्यकता पर्न सक्छ । बिरामीमा लक्षणहरु ढिलो देखिन्छ । यो बशांणुगत हुन्छ ।
Topics #के हाे मधुमेह #मधुमेह रोकथाम #मधुमेहबाट बच्ने फर्मुला
Up Next के कति खाने ? कस्तो र कति कसरत गर्ने मधुमेहका बिरामीले ? बुझिराखे धेरैको जोगिन्छ ज्यान